Ahoana ny famaritana ny fitondrana vohoka amin'ny ezopia amin'ny ambaratonga voalohany?
Mba hamaritana ny fandikana toy izany, toy ny fitondrana vohoka amin'ny ectopic, dia sarotra amin'ny ambaratonga voalohany. Ny zavatra dia tsy misy soritr'aretina manokana ahafahana milaza amin'ny fomba azo antoka momba ny fisian'ity korontana ity.
Inona avy ireo mari-pamantarana ny bevohoka ezôtika?
Amin'ny fampivelarana ny maha-bevohoka azy, ny tovovavy dia mahatsapa ny fahatsapana mitovy amin'ny amin'ny ara-dalàna. Amin'ity tranga ity dia misy ny fanamarihana:
fampiatoana amin'ny fadimbolana;
ny endriky ny soritr'aretin'ny toxikose;
fahamendrehana ao amin'ny ratra;
hampitombo ny mari-pamantarana.
Ankehitriny dia ilaina ny miresaka momba ny famantarana izay azo atao mba hamaritana ny vohoka amin'ny ectopic, ary amin'ny fotoana (herinandro). Tany aloha dia tsy hita afa-tsy tamin'ny herinandro 6-8 herinandro ny mpitsabo mpanimba herisetra, rehefa hita ny soritr'ilay fandikana, ary niharatsy ny toe-pahasalaman'ilay vehivavy bevohoka.
Ankehitriny, alohan'ny hamaritana ny vohoka eo amin'ny eokôpika amin'ny ambaratonga voalohany, ny dokotera dia mandefa fitsapana sy fikarohana. Ny andraikitra manokana eto dia ny fanadihadiana amin'ny haavon'ny hCG. Noho izany, rehefa manombana ny vokatra, raha mifantoka amin'ny ara-dalàna ny hormonina ary tsy mifanaraka amin'ny taom-pambolena, ny dokotera dia mandefa fanadihadiana ultrasound.
Amin'ny ankapobeny, ny ultrasound dia afaka mamaritra ny vohoka amin'ny ectopic, rehefa 7-10 andro no lasa hatramin'ny fahatanorana. Amin'izao fotoana izao dia mitranga ny fitrandrahana, i.e. fampidirana ny atody fetal ao amin'ny endometrium. Amin'io tranga io, dia hita mazava tsara ao amin'ny lavaka fananganana tranokala. Raha ny atody dia hita ao amin'ny tavoahangy trondro (izay matetika no mitazana amin'ny bevohoka ectopique), dia miresaka momba ny fivoaran'ny aretina izy ireo.
Ny fampivoarana io toe-javatra io dia miaraka ihany koa amin'ireo soritr'aretina manaraka:
fandotoana ra avy amin'ny taratasy mivalona;
fanaintainana eo amin'ny uterus sy ny ovaires;
ny fihenan'ny tsindry;
Inona no mety ho voka-dratsin'ny ectopic amin'ny vatan'ny reny?
Raha marina ny 100%, dia mamaritra ny fitondrana vohoka, na inona izany fehezanteny izany, ny dokotera dia afaka mampiasa irery ny solosaina ultrasound. Ireo soritr'aretina voalaza etsy ambony dia tsy azo ampiasaina hamantarana. Maro amin'izy ireo no voamarina amin'ny fitondrana vohoka.
Raha miresaka momba ny mampidi-doza ity fandikan-dalàna ity ho an'ny fahasalaman'ny reny, dia ny fiparitahan'ny tadin'ny tranon-jaza. Ity tranga ity dia mitranga rehefa tratran'ny aretina ilay aretina, noho ny fitsaboana tsy misy hatak'andro ny vehivavy bevohoka. Reny maro no hanandrana hiaritra ireo fanaintainana mamaivay, miharatsy ny toe-javatra, manoratra azy ireo amin'ny fisehoan'ny toxikose amin'ny fiandohan'ny fitondrana vohoka. Mampisy vokany mampalahelo izany. Noho ny fiparitahana, dia simbaina ny tsy fitovian'ny vatan'ny uterine, izay miteraka rà mandriaka. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy omena fanampiana avy hatrany.
Ny fomba tokana hanasarahana ity fandikan-dalàna ity dia ny fanadiovana. Ny atody foetal dia nesorina niaraka tamin'ny fitaovana fitsaboana manokana. Ny fandidiana dia maharitra 30 minitra ary tsy dia mampiasa loatra.
Taorian'ny fanadiovana, ny ultrasound dia tsy maintsy mandoa. Ny tanjona dia ny manaisotra ny fisian'ny ratra ao amin'ny atody na embryon foza, arakaraka ny fe-potoana hanaovana ilay fandidiana.
Noho izany, rehefa misy ny fitondrana vohoka, amin'ny fotoana rehetra dia mihatra amin'ny ultrasound. Aorian'ny fijerin'ny dokotera ny tsy fisian'ny atody foetal ao amin'ny tonon-taolam-paty dia ny famaritana ny diany. Ny fitsaboana dia atao avy hatrany, izay misoroka ny fampivoarana ny fahasarotana mety ho an'ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny foetus.
Afafazo mandritra ny fitondrana vohoka
Fanadiovana amin'ny fitondrana vohoka
Polyhydramnios amin'ny fitondrana 32 herinandro
Ny haben'ny taovam-pako isaky ny herinandro
Ahoana no hifoha maraina?
VSD amin'ny karazana mixed
Akanjo fotsy fotsy fohy
Stephanie Davis sy Jeremy McConnell dia miara-mivory ankehitriny
Loko misy loko
Aquamaris ho an'ny zaza vao teraka
Fanolorana volo fohy
Amber Hurd sy Ilon Mask dia nandrehitra ny dihin'ny dihy tao amin'ny clubclub iray
Ahoana ny fomba hanaovana famandrihana amin'ny tananao manokana?
Ahoana ny fisafidianana ny pantyhose amin'ny akanjo?
Pankreatitis amin'ny saka
Sofa avy amin'ny pallets
Fipoitra avy amin'ny tendany sy orona mankany staphylococcus aureus